Maahir Jaamac: Maxay tahay sababta saxaafada Puntland uga maqan tahay shirka Nusoj ee Xamar? – Puntland News.net
Home 2016 May 8 Opinion, Somali News Maahir Jaamac: Maxay tahay sababta saxaafada Puntland uga maqan tahay shirka Nusoj ee Xamar?
Maahir Jaamac: Maxay tahay sababta saxaafada Puntland uga maqan tahay shirka Nusoj ee Xamar?
May 8, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 0
NUSOJ WAAN WADA DHISANAYNAA DHAMAANTEEN!
Nusoj ma ahan cad hilib ah oo la qeybsanayo, saxaafadda Soomaaliyeedna ma ahan kuwo dhaqan siyaasadeed wax ku qeybsanaya, wariyaha jooga Puntland wuxuu la dareen iyo baahi yahay wariyaha kale ee jooga muqdisho, Baydhaba, Baladweyn iyo Kismaayo, sidaa darteed ma haboona in fikirka bulshada iyo kan saaxiibada qaar uu noqdo mid had iyo jeer daruufaha iyo marxaladaha jiri kara kali ah lagu cabiro cad qeybsi, qabyaalad, qaab deegaameed IWM, waxaana haboon inaan dhaqankeena bulsho kala dirirno malada iyo dabeecadaha fudud ee liita.
Hadaba wariyaasha Puntland iyo ururkooda MAP, waxay todobaadyo xidhiidh ah wadeen talo-wadaag iyo shirar ay ka soo saarayeen war-saxaaafadeedyo qoraal ah, inta badana ay ku muujinayeen sida loo gaari karo danta ma huraanka ah ee wariyaasha Soomaaliyeed oo maanta la hayo fursadii lagu amba-qaadi lahaa, Mar kasta dareenka wariyaasha Puntland wuxuu ku saleysnaa midnimada iyo isku duubnida wariyaasha Soomaaliyeed, mana dhicin in Wax tabasho ama cabasho gaar ah ay muujiyeen xitaa maalin qudha, waxaadna sidaa ku fahmaysaan in wariyaasha jooga Puntland ay yihiin kuwo isa saaray masuuliyad dheeri ah si loo xaqiijiyo himilada guud ee saxaafad qaran ee Soomaaliya.
Laakiin wakhtiga oo gaaban iyo maalmaha oo is guraya ayaa sababay in laga dib dhaco mudadii shirku uu furmayay, waana sax in wariyaasha PL ay yihiin kuwa kali ah ee ka maqnaa madasha shirka ay isugu yimaadeen dhamaan wariyaashii kale ee isaga kala yimi deegaanada kala duwan ee Soomaaliya, waana mid si isku mid ah noo wada taabanaysa inaan maalmo iska daaye xitaa daqiiqado aan ka maqnaano madal talo warbaahin Soomaaliyeed looga arinsanayo aayaheeda iyo Midnimadeeda.
Hadana waxaan idin la wadaagayaa in Wariyaal ka socda Puntland ay gaari doonaan maalinta beri ah magaalada Muqdisho si ay ugu gogol xaaraan tegitaanka dhamaan xubnaha ama wakiilada warbaahinta PL uga qeybgelaya shir-weynaha Nusoj ee haatan hakadka ku jira.
FG: Wariyaasha Puntland waxay kaga duwanyihiin kuwa jooga gobolada kale ee dalka waa in Codkoodu iyo aragtidoodu uu xambaaro halka urur ee ay ku midaysan yihiin ee MAP, hadana MAP waxay xubin ka tahay Gudiga badbaadada Nusoj ee soo qabanqaabiyay Shirka ka dhacaya Muqdisho, sidaa awgeed talo wadaag badan iyo gorfeyn lagu wada qaadanayo magaalooyinka Garowe, Boosaaso Illaa Galkacyo ayaa keenaya daahid ama dib u dhac mararka qaar ah.
Wey adagtahay in dhismaha Nusoj uu dhantaalo jiritaanka MAP, weyna adagtahay in MAP jiritaankeedu noqdo dhantaalka Nusoj!!!!.
XAAL GOBEED DHAMAANTIIN
W/Q Saxafi Maahir Jaamac Aadam